UMAHLUKO PHAKATHI KWEHOTMAIL.COM, MSN.COM, LIVE.COM KUNYE NE-OUTLOOK.COM? - ITHAMBILE
Nguwuphi umahluko phakathi kweHotmail.com, Msn.com, Live.com kunye ne-Outlook.com?
Ngaba udidekile phakathi kweHotmail.com, Msn.com, Live.com, kunye ne-Outlook.com? Uzibuza ukuba ziyintoni kwaye zahluke njani omnye komnye? Ewe, ukhe wazama ukufikelela www.hotmail.com ? Ukuba wenze njalo, ubuya kuthunyelwa kwi-Outlook iphepha lokungena. Kungenxa yokuba iHotmail, enyanisweni, yabuyiselwa kwi-Outlook. Ke ngokusisiseko, iHotmail.com, Msn.com, Live.com, kunye ne-Outlook.com zonke zibhekisa, ngaphezulu okanye ngaphantsi, kwinkonzo efanayo yewebhu. Ukusukela oko iMicrosoft yafumana i-Hotmail, kuye kwathiwa igama lenkonzo amaxesha ngamaxesha, kudide abasebenzisi bayo ngokupheleleyo. Nantsi indlela uhambo olusuka kwi-Hotmail ukuya kwi-Outlook:
Iifestile zihlala kwiHOTMAIL
OUTLOOK.COM, IMEYA YOKUKHANGELA OKANYE KUNYE (NEOFISI) UKUKHANGELA
IDESKTOP EMEIL UMTHENGI
Enye yeenkonzo zokuqala ze-webmail, ezaziwa ngokuba yi-Hotmail, yasekwa kwaye yasungulwa ngo-1996. IHotmail yenziwa yaza yenziwa kusetyenziswa i-HTML (uLwimi lweMibhalo yokuPhawula) kwaye, yiyo loo nto, ekuqaleni yayichazwa njenge-HoTMaiL (qaphela oonobumba abakhulu). Ivumela abasebenzisi ukufikelela kwi-inbox yabo naphina kwaye ke babakhulule abasebenzisi kwi-imeyile esekwe kwi-ISP. Yathandwa kakhulu kungaphelanga nonyaka wokuphehlelelwa kwayo.
U-Microsoft ufumene i-Hotmail ngo-1997 kwaye wadityaniswa neenkonzo ze-intanethi ze-Microsoft, ezaziwa njenge-MSN (Microsoft Network). Emva koko, i-Hotmail yaphinda yaziwa njenge-MSN Hotmail, ngelixa yayisaziwa njenge-Hotmail uqobo. UMicrosoft kamva wayidibanisa neMicrosoft Passport (ngoku Iakhawunti yeMicrosoft ) Waphinda wayidibanisa nezinye iinkonzo phantsi kweMSN njengomthunywa weMSN (umyalezo okhawulezileyo) kunye nezithuba zeMSN.
Ngo-2005-2006, uMicrosoft wabhengeza igama elitsha lophawu lweenkonzo ezininzi zeMSN, okt Windows Live. UMicrosoft ekuqaleni wayecebe ukuyinika elinye igama iMSN Hotmail kwiWindows Live Mail kodwa abavavanyi be-beta bakhetha igama elaziwayo Hotmail. Ngenxa yoku, iMSN Hotmail yaba yiWindows Live Hotmail phakathi kwezinye iinkonzo zeMSN. Inkonzo ijolise ekuphuculeni isantya, ukwandisa indawo yokugcina, amava angcono omsebenzisi kunye neempawu zokusebenziseka. Emva kwexesha, i-Hotmail yenziwa ngokutsha ukongeza amanqaku amatsha anje ngeeNdidi, iiNtshukumo ezikhawulezayo, uSweep ohleliweyo, njl.
Ukusukela ngoko, uphawu lwe-MSN lwatshintsha ugxininiso lwalo oluphambili kumxholo okwi-intanethi njengeendaba, imozulu, ezemidlalo, kunye nokuzonwabisa, ezenziwa zafumaneka kwiwebhu portal msn.com kunye neWindows Live ezigubungela zonke iinkonzo ezikwi-intanethi zika-Microsoft. Abasebenzisi abadala abangakhange bahlaziye kule nkonzo intsha banokufikelela kwi-interface yeMSN Hotmail.
Ngo-2012, i-Windows Live brand yacinywa. Ezinye zeenkonzo zabuyiselwa ngokuzimela kwaye ezinye zahlanganiswa kwiWindows OS njengeeapps kunye neenkonzo. Kude kube ngoku, inkonzo ye-webmail, nangona yathiywa igama amaxesha ambalwa, yayisaziwa njenge-Hotmail kodwa emva kokuyekiswa kweWindows Live, i-Hotmail ekugqibeleni yaba yi-Outlook. Imbonakalo ligama elaziwa ngayo yiMicrosoft webmail ngenkonzo namhlanje.
Ngoku, i-outlook.com yinkonzo ye-webmail esemthethweni onokuyisebenzisa kuyo nayiphi na iidilesi zakho ze-imeyile zeMicrosoft, nokuba yi-outlook.com i-imeyile okanye iHotmail.com esetyenzisiweyo ngaphambili, msn.com okanye i-live.com. Qaphela ukuba ngelixa usenakho ukufikelela kwiiakhawunti zakho ze-imeyile ezindala ku-Hotmail.com, Live.com, okanye Msn.com, iiakhawunti ezintsha zinokwenziwa kuphela njengeakhawunti ye-outlook.com.
Ke, le yindlela i-Hotmail etshintshe ngayo yaba yi-MSN Hotmail, emva koko yaya kwiWindows Live Hotmail kwaye ekugqibeleni yaya kwi-Outlook. Konke oku kuphinda kuthiwe igama ngokutsha nguMicrosoft kukhokelele kwisiphithiphithi phakathi kwabasebenzisi. Ngoku, ukuba sineHotmail.com, Msn.com, Live.com, kunye ne-Outlook.com konke kucacile, kusekho ukudideka okunye okuseleyo. Sithetha ntoni kanye kanye xa sisithi i-Outlook? Kwangoko xa sathi Hotmail, abanye bayayazi into ebesithetha ngayo kodwa ngoku emva kwako konke oku kuthiywa ngokutsha, sibona iimveliso ezininzi ezahlukeneyo okanye iinkonzo ezinxulunyaniswe negama eliqhelekileyo elithi 'Outlook'.
Ngaphambi kokuba siqhubeke nokuqonda indlela i-Outlook.com, i-Outlook Mail kunye ne-Outlook eyahlukileyo ngayo, siza kuqala sithethe malunga nezinto ezimbini ezahlukeneyo: Umxhasi we-imeyile yeWebhu (okanye usetyenziso lwewebhu) kunye nomxhasi we-imeyile yeDesktop. Ezi zezona ndlela zimbini unokufikelela kuzo kwii-imeyile zakho.
Usebenzisa umxhasi we-imeyile yewebhu nanini na xa ungena kwiakhawunti yakho ye-imeyile kwisikhangeli sewebhu (njengeChannel, Firefox, Internet Explorer, njl. Umzekelo, ungena kwiakhawunti yakho kwi-outlook.com kuso nasiphi na isikhangeli sewebhu. Awudingi inkqubo ethile yokufikelela kwii-imeyile zakho ngokusebenzisa umxhasi we-imeyile yewebhu. Yonke into oyifunayo sisixhobo (njengekhompyuter yakho okanye ilaptop) kunye nonxibelelwano lwe-intanethi. Qaphela ukuba xa ufikelela kwii-imeyile zakho kwisikhangeli sewebhu kwiselfowuni yakho, uyaphinda usebenzisa umxhasi we-imeyile yewebhu.
Kwelinye icala, usebenzisa umxhasi weimeyile ye-imeyile xa usungula inkqubo yokufikelela kwii-imeyile zakho. Usenokuba usebenzisa le nkqubo kwikhompyuter yakho okanye kwifowuni yakho ephathekayo (kwimeko leyo sisixhobo semeyile eselfowuni). Ngamanye amagama, inkqubo ethile oyisebenzisayo ukufikelela kwiakhawunti yakho ye-imeyile ngumxhasi we-imeyile yakho yedesktop.
Ngoku, kuya kufuneka ukuba uzibuze ukuba kutheni le nto sithetha ngezi ntlobo zimbini zabathengi be-imeyile. Ngokwenyani, nantsi into eyahlula phakathi kwe-Outlook.com, i-Outlook Mail kunye ne-Outlook. Ukuqala nge-Outlook.com, ibhekisa kubathengi be-imeyile abakhoyo kwiMicrosoft, ngaphambili ibiyiHotmail.com. Ngo-2015, iMicrosoft yaphehlelela i-Outlook Web App (okanye i-OWA), ngoku ebizwa ngokuba yi “Outlook kwiwebhu” njengenxalenye yeOfisi 365. Ibandakanya ezi nkonzo zine zilandelayo: I-Outlook Mail, Ikhalenda ye-Outlook, Abantu be-Outlook kunye neMisebenzi ye-Outlook. Ngaphandle kwezi, i-Outlook Mail ngumxhasi we-imeyile oyisebenzisayo ukufikelela kwi-imeyile yakho. Ungayisebenzisa ukuba ubhalisile kwiOfisi 365 okanye ukuba uyakwazi ukufikelela kwiServer Exchange. I-Outlook Mail, ngamanye amagama, ithatha indawo ye-Hotmail interface oyisebenzise ngaphambili. Okokugqibela, iklayenti ye-imeyile ye-imeyile kaMicrosoft ibizwa ngokuba yi-Outlook okanye iMicrosoft Outlook okanye ngamanye amaxesha, iOfisi yokujonga izinto. Inxalenye yeMicrosoft Outlook ukusukela kwiOfisi 95 kwaye ibandakanya amanqaku afana nekhalenda, umphathi woqhakamshelwano kunye nolawulo lomsebenzi. Qaphela ukuba iMicrosoft Outlook ikwafumaneka kwiifowuni eziphathwayo kunye neepilisi ezineenkqubo zokusebenza ze-Android okanye ze-iOS kunye neenguqulelo ezimbalwa zefowuni yeWindows.
Yiyo leyo. Siyathemba ukuba konke ukudideka okunxulumene ne-Hotmail kunye ne-Outlook ngoku kusonjululwe kwaye yonke into icacile.
inkqubo kunye nememori ecinezelweyo yokusetyenziswa okuphezulu
ulwahlulo olusebenzayo ngoku lucinezelwe
Uyihlaziya njani i-realtek driver windows 10
Impazamo ebalulekileyo imenyu yakho ayisebenzi
Ukudlala ngokuzenzekelayo kungasebenzi windows 10
Ukuqhawula ilaptop kwiwifi windows 10
windows Ibar ye-10 yokukhangela iyaqhubeka nokuvela